Wariyaha Ogaden Online uga soo warama Gobolka Afhdeer iyo dadka shacabka ee ku sugan magaalada Afdheer ayaa sheegaya in dad tiradoodu kor u dhaafeyso 20 qof xabsiga loo taxaabey. Dadkaas oo u badan dumar ayaa waxaa ku jirta qof wayeel ah oo da’dadeeda lagu sheegay qiyaastii 80 jir.
Sida warku sheegayo maleeshiyaadka ka amar qaata dhagar qabe Cabdi Iley ayaa dadka ku qasbey in ay soo dhaweeyaan Ina Iley oo magalaada socdaal ku tagey. Balse shacabka ayaa diiday in ay wax soo dhaweyn ah u sameeyaan. Sida dadka ku sugan magaalada Birqof ay wariyaheena u sheegayaan dadkan xabsiga loo taxaabey ayaa lagu eedeynayaa amar diido.
Qaar ka mid ah magacayada dadka xabsiga la dhigey ayaa waxaa ka mid ah:
Rooda Cali Madar
Maryama Sheekh Maxamuud
Maryan Cirday (Hooyo 80 jir ah)
Xubbi Faarax Warmooge.
Hodan Muxumed Axmed
Hinda Muxumed Axmed
Ina Iley oo ay weheliyan Saraakiil ka mid ah TPLF ayaa beryahan socdaalo ku bixinaya Gobolada dalka, isaga oo dadka u abaabulaya qaab beeleed ama qabiil. 2 Bilood ka hor wuxuu dadka u sheegey in Oromo duulaan ku tabay Soomaalida, isla markaana loo baahan yahay in la iska celiyo, fikirkaas oo ahaa id ay u soo dhiibeen Taliyaayaasha TPLF. Qorshaha ama mashruuca hada loo soo dhiibey Ina Iley ayaa ah mid u baabulan qaab qabiileysan isaga oo u sheegaya in Qabiilka Ciise duulaan ku yhiin qabiilka Ogaden.
Dhamaan goobihii uu shirarka ku qabtey ma jirto wax soo dhaweyn ama dibad bax lagu taageerayo qorshihiisa oo ka hirgaley. Waxaa xasuus mudan in bilowga todobaadkan Magaalaad Qabridahar lagu toogety Gabar lagu magacaabi jirey Maryan Muxumed Muuse, taas oo lagu eedeyeye in ay didantahay in ay ka sooq aby gasho banaanbax lagu taagerayo Ina Iley.
PreviousEthiopian forces kill three Somalis in Togwajale protests
NextSomalia blast kills at least 7 soldiers in Wanlaweyn